Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiir cusub oo ay Itoobiya u soo magacaawday Soomaaliya
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh ayaa maanta xafiiskiisa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku qaabilay safiir cusub oo ay dowladda itoobiya u soo magacaawday Soomaaliya, isaga oo ka guddoomay warqadihii aqoonsiga.
Madaxweynaha iyo safiirka ayaa kadib markii uu ka gudoomay warqadaha aqoonsiga waxaa ay ka wada hadlleen arrimo badan oo la xiriira cilaaqaadka labada dowladda, waxaana uu madaxweyne Xassan Sheekh uga mahad celiyay dowladda Itoobiya sida ay u barbartagan tahay nabada Soomaaliya.
Wondimu Asaminew oo ah safiirka cusub ayaa uga mahad celiyay dhinaciisa madaxweynaha dowladda Soomaaliya soo dhaweyntiisa, isaga oo sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu ka howlgalo Soomaaliya.
”Waxaan ku faraxsanahay in aan noqdo safiirka Soomaaliya waayo Itoobiya iyo Soomaaliya waa labo dowladood oo daris ah xiriir badanna uu ka dhaxeeyo, sidaa daraadeed shaqada Soomaaliya aan ka qabanayo aad ayaan ugu faraxsannahay,” ayuu yiri Wondimu Asaminew.
Dowladda Itoobiya waxaa ay ka mid tahay dowladaha xiriirka dhow la leh Soomaaliya, gaar ahaan waxaa ay gacan buuxda ka siinaa dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah xoogagga Al-shabaab.